Archive du 20170302
Vahoakan�i Besalampy Leo ny kitoatoan�ny polisy
Niala tamin�ny fahanginanany ka namoaka fanambarana nanoloana ny mpanao gazety tetsy amin�ny 67 ha misy ny biraon�ny Fizamami ny Fikambanan�ny terak�i Besalampy monina eto Antananarivo notarihan�ny filohany, Atoa Badory Victor, niaraka tamin�ireo olobe ao an-tan�na nisolontena ireo vahoakan�ity distrika ity naniraka azy ireo.
Fampiantsoan�ny Bianco �Azo samborina izay tsy tonga�
Mbola ny 65% amin�ireo tompon�andraiki-panjakana no tsy nahavita ny fanambaram-pananany raha ny tatitra farany nataon�ny Bianco,
Antoko Otrikafo � Aleo midina an-dalambe ! �
Nijolofotra ny famoriam-bahoaka voalohany nataon�ny antoko Otrikafo tamin�ity taona ity tetsy amin�ny foibeny etsy Andravoahangy omaly.
Rajaonarimampianina Hamono afo any Befandriana ?
Mbola tena mafana ny raharaha Befandriana Avaratra amin�izao fotoana izao ary lasa raharaham-pirenena mihitsy.
Fisakana tsa hanim-boay Tsy hifanavaka loko politika eny Soanierana rahampitso alina
Mihetsika toy ny isan-taona ny terak�i Fisakana tsa hanim-boay ka hifampiarahaba noho ny fahatrarana ny taona vaovao 2017 amin�ny dihy alina eny amin�ny Cemes Soanierana.
Natao ho an�iza ny lal�na ?
Miarahaba ry Jean a ! Raha vorodamba ny vavako efa tataka tamin�ny fitenenana anareo.
Zandarimariam-pirenena 1 530 nanao fanambaram-panana
Nanao fanambaram-pananana ny zandary miisa 1 530 nanomboka amin�ny grady GP2, ka hatramin�ireo tompon�andraikitra ambony avy amin�ny sampan�ny zandarimaria maromaro eto Antananarivo omaly.
Fiadidiana ny Repoblika Mamokatra gazoala tsy ara-dal�na ao Ampangabe ?
Roa taona no nisian�ilay fitrandrahana gazoala tsy manara-dal�na ao anatin�ny kaominina ambanivohitra Ampangabe distrikan�Ambohidratrimo.
Fandorana tan�na tany Befandriana Tokony hisy hametraka fitoriana, hoy Me Olala
Tsy azo avela fotsiny amin�izao ny raharaha fa ilaina ny fametrahana fitoriana momba ireo trano efa ho 400 mahery may tany Befandriana Avaratra, hoy ny Maitre Willy Razafinjatovo na Olala omaly raha tafaresaka tamin�ny mpanao gazety izy.
Kaominin'Ambohijanaka Trano 60 isa no mety horavana
Taorian�ny fandravana trano teny Soavimasoandro sy Ivato mba hahafahana manitatra ny lalana eto an-drenivohitra sy ny manodidina dia voakasika ihany koa ny kaominina Ambohijanaka Atsimondrano amin�izao fotoana izao
FIAKARAN�NY VIDIM-PIAINANA Vokatry ny tsy fandraisan'andraikitry ny fanjakana
Tsy misy izay tsy mikolay amin�ny fiakaran�ny vidim-piainana ankehitriny ny isam-baravarana.
Faritra Melaky Horakofana ala honko
Ny 65%-n�ny tanjona tiana hotratrarina amina fandrakofana ala honko ny faritra Melaky hatreto no vitan�ny sampandraharahan�ny firenena mikambana misahana ny tontolo iainana na ny WWF sy ireo vondron�olona ifotony any an-toerana ary ireo mpiara-miombon�antoka amin�izy ireo.
Misy mihaino ? Ela izay no tsy nahenoana io fitenin-jatovo nalaza tamin�ny tetezamita farany teo io.
CEPE sy BEPC 2017 Maimaimpoana ny fisoratana anarana
Tsy misy saram-pisoratana aloa amin`ny fanadinam-panjakana CEPE SY BEPC taom-pianarana 2016-17.
Mpikirakira ra ao amin�ny HJRA Hitokona manomboka anio
Milaza ny hanao fitokonana ny eo anivon�ny sampandraharaha misahana ny fikirakirana ny tahirin-dra ao amin�ny hopitalim-panjakana HJRA anio.